Adderall XR သောက်သုံးသောပုံစံများနှင့်အားသာချက်များ | တစ်ယောက်တည်း - မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း | ဇန္နဝါရီလ 2022
ကုမ္ပဏီ ကနျြးမာရေးပညာရေး, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ ရပ်ရွာ၊ ဖျော်ဖြေရေး ရပ်ရွာ ကုမ္ပဏီ, ကျန်းမာရေးပညာရေး ကျန်းမာရေး ကုမ္ပဏီသတင်း ကုမ္ပဏီ, အဆိုပါကုန်ပစ္စည်း ကျန်းမာရေးပညာရေး ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးအချက်အလက် သတင်း ကုန်ပစ္စည်း မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း ပြင်းထန်သောအားကစား
အဓိက >> မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း >> Adderall XR သောက်သုံးသောပုံစံများနှင့်အားသာချက်များ
Adderall XR ပုံစံများနှင့်အားသာချက်များ | အရွယ်ရောက်သူများအတွက် | ကလေးများအတွက် | Adderall XR သောက်သုံးသောဇယား | ADHD အတွက် | Adderall XR ယူနည်း | မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
Adderall XR သည်အမှတ်တံဆိပ်တိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်သည့်ဆေးညွှန်းဖြစ်ပြီးအာရုံစူးစိုက်မှု - လိုငွေပြမှုအလွန်များပြားသောရောဂါလက္ခဏာများ (ADHD) ကိုဂရုမစိုက်မှု၊ Adderall XR ကိုနံနက်ယံ၌တစ်ကြိမ်သာအစာနှင့်ဖြစ်စေ၊ စားသောက်ခြင်းမရှိဘဲတစ်ကြိမ်တည်းသောက်သည်။ ဒါဟာ ဓာတုဗေဒဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည် တစ်နေ့လျှင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာဆေးသောက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းကိုဖယ်ရှားပေးသောတစ်နေ့တာလုံးဆေးဖြည်းဖြည်းချင်းဖြန့်ချိရန်ဖြစ်သည်။
RELATED: Adderall XR အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ Adderall XR အထူးလျှော့စျေးများရယူပါ
Adderall XR ပုံစံများနှင့်အားသာချက်များ
Adderall XR ဆေးတောင့်သည်အားသာချက်ခြောက်ခုရှိသည်။
တိုးချဲ့လွှတ်ပေးရန်တောင့:5mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg နှင့် 30 mg
ဖြန့်ချိထုတ်လွှတ်သည့်ဆေးတောင့်တစ်ခုစီတွင် dextroamphetamine sulfate, amphetamine sulfate, dextroamphetamine saccharate နှင့် amphetamine aspartate အမ်ဖီတမင်းဆားလေးမျိုးပါရှိသည်။
လူကြီးများအတွက် Adderall XR သောက်သုံးသော
Adderall XR သည် ADHD ၏လက္ခဏာများကိုနေ့စဉ်နံနက်တိုင်းတစ်ကြိမ်သောက်သုံးသည်အလုပ်လုပ်တဲ့ချို့ယွင်းစေနိုင်သည်အရွယ်ရောက်သူများ၊ မြီးကောင်ပေါက်များနှင့်အသက် ၆ နှစ်နှင့်အထက်ကလေးများဖြစ်သည်။ ဆေးများကွာခြားပါလိမ့်မည် လူနာ၏လိုအပ်ချက်ပေါ် မူတည်၍ ဆေးသည်မည်မျှကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ကြောင်းနှင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်နိုင်ချေများပေါ်မူတည်သည်။ အဆိုပါကုထုံးရည်မှန်းချက်သို့သော်ရန်ဖြစ်ပါသည်အနိမ့်ဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှထိရောက်သောဆေးထိုးပါ။
စံ သောက်သုံးသော အရွယ်ရောက်သူများအတွက် နံနက်ယံ၌တစ်ချိန်ကယူ 20-60 မီလီဂရမ်
အရွယ်ရောက်သူများအတွက်အများဆုံး: တစ်နေ့လျှင် 60 မီလီဂရမ်
ကလေးများအတွက် Adderall XR သောက်သုံးသောဆေး
အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှု (FDA) သည် ADHD အတွက်အသက် ၆ နှစ်အောက်ကလေးများအတွက် Adderall XR ကိုကလေးအထူးကုအသုံးပြုရန်အတည်ပြုခဲ့သည်။
6-12 ကလေးများအတွက်စံသောက်သုံးသော: နံနက်ယံ၌တစ်ကြိမ်နေ့စဉ် 5-30 mg ကိုသောက်
6-12 ကလေးများအတွက်အများဆုံးသောက်သုံးသောပမာဏ နေ့စဉ် 30 မီလီဂရမ်
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် ၁၃-၁၇ အရွယ်များအတွက်ပုံမှန်သောက်သုံးသောပမာဏ - နံနက်ယံ၌တစ်ကြိမ်နေ့စဉ် 10-40 မီလီဂရမ်
၁၃-၁၇ မှကလေးများအတွက်အများဆုံးသောက်သုံးသောပမာဏ - နေ့စဉ် 40 မီလီဂရမ်
Adderall XR သောက်သုံးသောဇယား
ADHD အရွယ်ရောက်ပြီးသူ 18 နှစ်နှင့်အထက် နံနက်ယံ၌တစ်ကြိမ်နေ့စဉ်ယူ 20 မီလီဂရမ် နံနက်ယံ၌တစ်ချိန်ကယူ 20-60 မီလီဂရမ် တစ်နေ့လျှင် 60 မီလီဂရမ်
မြီးကောင်ပေါက် 12-17 နှစ် 10 မီလီဂရမ်နံနက်ယံ၌တစ်ကြိမ်နေ့စဉ်ယူ 10-40 မီလီဂရမ်နံနက်ယံ၌တစ်ကြိမ်နေ့စဉ်ယူ တစ်နေ့လျှင် 40 မီလီဂရမ်
ကလေးများ 6-11 နှစ် 5-10 မီလီဂရမ်နံနက်ယံ၌တစ်ကြိမ်နေ့စဉ်ယူ နံနက်ယံ၌တစ်ချိန်ကနေ့စဉ် 5-30 မီလီဂရမ် တစ်နေ့လျှင် 30 မီလီဂရမ်
ADHD အတွက် Adderall XR သောက်သုံးသော
Adderall XR ဆေးတောင့်များကိုအသက် ၆ နှစ်နှင့်အထက်လူကြီးများနှင့်ကလေးများအတွက် hyperactive-impulsive and inattentive လက္ခဏာများကိုထိန်းချုပ်ရန်ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ ADHD ကိုမှန်ကန်စွာစစ်ဆေးရန်အတွက်ရောဂါလက္ခဏာများသည်ကျောင်း၊ အလုပ်၊ အိမ်စသည့်နေ့စဉ် ၂ ခုသို့မဟုတ်ထို့ထက်ပိုသောနေ့စဉ်အခြေအနေများတွင်သိသာသောလည်ပတ်မှုချို့ယွင်းမှုဖြစ်စေရန်အလုံအလောက်ပြင်းထန်ရမည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ ၁၈ နှစ်နှင့်အထက်: နံနက်ယံ၌တစ်နေ့တာ၏ဆေးထိုးအဖြစ် 20-60 mg ကိုသောက်
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် ၁၂-၁၇ နှစ် 10-40 မီလီဂရမ်နံနက်ယံ၌တစ်ခုတည်းနေ့စဉ်ဆေးထိုးအဖြစ်ယူ
ကလေးများ 6-11 နှစ် နံနက်ယံ၌တစ်နေ့တာဆေးထိုးအဖြစ် 5-30 မီလီဂရမ်ယူ
ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာလူနာများ (ကျောက်ကပ်ရောဂါ) - ဆေးချိန်ညှိမှု :
30-50 milliliters ml / min / 1.73 မီတာ၏ Glomerular filtration မှုနှုန်း (GFR)နှစ်: သတ်မှတ်မထားဘူး
15 မှ GFR<30 ml/min/1.73 mနှစ်- ၁၅ မီလီဂရမ် (အရွယ်ရောက်ပြီးသူ) သို့မဟုတ် ၅ မီလီဂရမ် (ကလေးများ ၆-၁၇) ကိုနံနက်တိုင်းတစ်နေ့တည်းသောက်သုံးသည်
15 ml / min / 1.73 m ထက်နည်းသော GFRနှစ်: အားမပေးပါ
Parenteral Dialysis: သတ်မှတ်မထား
အသည်းရောဂါရှိသောလူနာများ (အသည်းရောဂါ) : သတ်မှတ်မထား
Adderall XR ယူနည်း
သတ်မှတ်ထားသောအတိုင်းအတိအကျ Adderall XR ကိုယူပါ။
ဆေးတောင့်ကိုရေနှင့်မျိုပါ။ ကြိတ်ခွဲခြင်း၊ ဝါးခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။
အကယ်၍ ဆေးတောင့်ကိုမျို ချ၍ မရပါက၎င်းကိုဖွင့်ပြီးပါ ၀ င်သောအရာများကိုပန်းသီးဇွန်းတစ်ဇွန်းပေါ်တွင်ဖြန်းနိုင်သည်။
ဇွန်းတစ်လုံးလုံးကို applesauce နှင့်ဆေး၏ချက်ချင်းယူပြီးဝါးခြင်းမပြုဘဲမျိုချပါ။
Adderall XR အလွန်အကျွံသောက်ပါကဆရာဝန်သို့မဟုတ်အဆိပ်ထိန်းချုပ်ရေးဌာနမှချက်ချင်းဆေးကုသမှုခံယူပါ။
သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်ကိုအမြဲတမ်းစစ်ဆေးပါ။ အကယ်၍ သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်ရက်ကျော်လွန်ပါကဆေးဝါးကိုဘေးကင်းစွာဖယ်ရှားပြီးဆေးညွှန်းအသစ်တစ်ခုရယူပါ။
Adderall သည်အစိုဓာတ်၊ အပူနှင့်အလင်းတို့မှအခန်းအပူချိန် (၆၈ မှ ၇၇ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်) တွင်သိုလှောင်ထားသင့်သည်။
Adderall XR သောက်သုံးသောမကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
Adderall XR အလုပ်လုပ်ရန်မည်မျှကြာမည်နည်း။
Adderall XR သည်မိနစ် ၃၀ မှတစ်နာရီအတွင်းအုပ်ချုပ်မှုစတင်ပြီးမှစတင်သည်။ အစားအစာသည် Adderall XR ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိစုပ်ယူမှုကိုမထိခိုက်ပါ။
Adderall XR သည်သင်၏စနစ်တွင်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးနေရမည်နည်း။
Amphhetamines သည် ADHD ရောဂါလက္ခဏာများကိုမည်သို့ထိန်းချုပ်နိုင်မည်ဆိုသည်မှာမသေချာသော်လည်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကျွမ်းကျင်သူအများစုက ဦး နှောက်အတွင်းရှိ norepinephrine နှင့် dopamine အဆင့်မြင့်လာခြင်းကြောင့်အာရုံကြောများအကြားအချက်ပြမှုကိုကူးစက်စေသောအရာများကြောင့်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ amphetamines များသည် ADHD ၏လက္ခဏာများကိုမည်မျှကြာကြာထိန်းချုပ်ထားသည်၊ သို့သော်သူတို့သည်စနစ်အတွင်း၌အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးနေမည်နည်း။ Adderall သည် ADHD ရောဂါလက္ခဏာများကို ၁၂ နာရီအထိထိန်းချုပ်နိုင်သည်ဖြစ်သော်လည်း ၄ င်း၏တက်ကြွသောပါဝင်ပစ္စည်းများသည်စနစ်အတွင်းတွင် ပို၍ ကြာရှည်နေနိုင်သည်။
Adderall XR ရှိအမ်ဖီတမင်းအမျိုးအစားတစ်မျိုးစီကိုခန္ဓာကိုယ်ကဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်နှင့်ဖယ်ထုတ်သည်။ Dextroamphetamine ကိုဝက်သက်တမ်းနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာမှဖယ်ထုတ်သည် ကိုးမှ 11 နာရီဝက်နှင့် levoamphetamine ကိုခန္ဓာကိုယ်မှဝက်သက်တမ်းတစ်ဝက်နှင့်ဖယ်ထုတ်ပစ်သည် 11 မှ 14 နာရီ။ Half-Life သည်ခန္ဓာကိုယ်မှဖယ်ထုတ်ပစ်ရန်အတွက်မူးယစ်ဆေးပမာဏ၏ထက်ဝက်ကိုကြာရန်အချိန်မည်မျှကြာသည်။ ဆိုလိုသည်မှာဤ amphetamines များသည် Adderall XR ကိုသောက်ပြီးနောက် ၂၄ နာရီအကြာတွင်သွေးကြောထဲအလွယ်တကူရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။
ယူနိုင်ပါတယ် 46 နာရီအထိ Adderall XR ရှိအမ်ဖီတမင်းဆေးသည်သွေးစီးဆင်းမှုတွင်မတွေ့ရှိနိုင်သောအဆင့်များသို့ကျရောက်သွားစေသည်။ Adderall XR ရှိအမ်ဖီတမင်းဆေးကိုနောက်ဆုံးဆေးသောက်ပြီးနောက်သုံးရက်မှ ၄ ရက်အပြီးဆီး၌တွေ့နိုင်သည် သုံးလအထိ (သို့မဟုတ်ကြာကြာ) ။
Adderall XR ဆေးထိုးခြင်းကိုကျွန်ုပ်လက်လွတ်လျှင်ဘာဖြစ်မည်နည်း။
သတိရသည့်အချိန်တွင်လွဲချော်သောဆေးကိုရနိုင်သော်လည်း၊ မွန်းတည့်လျှင်မဟုတ်ပါ၊ သို့မဟုတ်ဆေးသည်အိပ်ငိုက်စေနိုင်သည်။ ထိုကိစ္စတွင် Adderall XR ဆေးထိုးရန်နောက်တစ်နေ့အထိစောင့်ဆိုင်းခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သင်၏ဆေးညွှန်းဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး နှင့်ဆေးသောက်လျှင်ဆေးထိုးရန်ပျက်ကွက်ပါကမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုလည်းသင်စစ်ဆေးနိုင်သည်။
Adderall XR ကိုဘယ်လိုဖြတ်မလဲ။
Adderall XR သည်တစ်ခုဖြစ်သည် ဇယား II ကိုထိန်းချုပ်ထားပစ္စည်းဥစ္စာ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်မှီခိုမှုအန္တရာယ်များကြောင့်ဖြစ်သည်။ မည်သည့်ဆေးကိုပင်အသုံးပြုပါစေ Adderall XR ကိုမည်သို့ရပ်တန့်ရမည်ကိုဆရာ ၀ န်နှင့်အမြဲတမ်းပြောပါ။ အချိန်ကြာမြင့်စွာသောက်သုံးသူများအနေဖြင့် Adderall XR ကိုရုတ်တရက်ရပ်တန့်ခြင်းသည်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်အိပ်စက်ခြင်းပြasနာများကဲ့သို့သောရုပ်သိမ်းမှုလက္ခဏာများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ အချို့သောသူများအတွက် Adderall XR သည်မူးယစ်ဆေးဝါးလုံးဝရပ်ဆိုင်းခြင်းမပြုမီတဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးလာသည့်နှုန်းများဖြင့်စောင်းစောင်းရန်လိုအပ်သည်။
Adderall XR ကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်လိုအပ်သည့်အခြေအနေအနည်းငယ်ရှိသည်။
လူတစ် ဦး သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါသို့မဟုတ် Tourette ၏ရောဂါရှိပါက Adderall XR သည်စိတ်ရောဂါအခြေအနေကိုလက္ခဏာပြခြင်းသို့မဟုတ်လက်ရှိအခြေအနေကိုပိုမိုဆိုးဝါးစေနိုင်သည်။
မူးယစ်ဆေးဝါး၊ မူးဝြေခင်း၊ တုန်ခါခြင်း၊ ကြွက်သားများလိမ်ခြင်း၊ နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း၊ ချွေးထွက်ခြင်းနှင့်ကြွက်သားများတင်းကျပ်ခြင်းစသည့်လက္ခဏာများဖြင့်မှတ်သားထားသည်။
Adderall XR ကိုသောက်နေစဉ်လူအချို့တွင်ဖမ်းဆီးရမိခြင်းခံရနိုင်သည်။
အချို့လူများက Adderall XR ကိုစိတ်ထိခိုက်စေသည့်တုံ့ပြန်မှုရှိနိုင်သည်။
ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုဖြစ်ရပ်များအတွက်, Adderall XR ရပ်တန့်သင့်ပါတယ်။ Adderall XR သောက်သူသည်ချက်ချင်းဆေးကုသမှုခံယူသင့်သည်။
အခြားဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများအရ Adderall XR ကုသမှုကိုရပ်တန့်ရန်အချိန်ကာလရှိနိုင်သည်။ ဥပမာနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာပြောင်းလဲခြင်း၊ ကျူးကျော်ခြင်းနှင့်ကြီးထွားနှုန်းနှေးကွေးခြင်း (ကလေးများအတွက်) ။ ပြproblemsနာများပေါ်ပေါက်လာပါက Adderall XR ဖြင့်ကုသမှုကိုရပ်တန့်ရန် (သို့) ရပ်ဆိုင်းရန်လိုအပ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ Adderall XR သည်အသုံးမပြုနိုင်သောကုသမှုတစ်ခုမဟုတ်တော့ပါကအခြားရွေးချယ်စရာ ADHD ဆေးများ Ritalin ပါ ၀ င်သည်။ methylphenidate ), ဖိုကလင်း dexmethylphenidate ) နှင့် Strattera ( အက်တမ် ) ။
ဘာလဲအများဆုံးသောက်သုံးသောAdderall XR အတွက်?
Adderall XR အတွက်အများဆုံးအကြံပြုထားသည့်ဆေးပမာဏသည်အရွယ်ရောက်သူများအတွက်နေ့စဉ် ၆၀ မီလီဂရမ် (၁၈ နှစ်မှနှစ်နှစ်)၊ ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များအတွက်နေ့စဉ် 40 မီလီဂရမ် (၁၂-၁၇ နှစ်) နှင့်ကလေးသူငယ်များအတွက်နေ့စဉ် ၃၀ မီလီဂရမ် (၆ နှစ်မှ ၁၁ နှစ်အတွင်း) ဖြစ်သည်။ ပြင်းထန်သောကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာချို့ယွင်းမှုရှိသောကလေးများအတွက်နေ့စဉ်အမြင့်ဆုံးပမာဏသည်တစ်နေ့လျှင် ၂၀ မီလီဂရမ်ဖြစ်သည်။ ပြင်းထန်သောကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာချို့ယွင်းမှုရှိသည့်လူကြီးများအတွက်နေ့စဉ်တစ်နေ့လျှင် ၁၅ мгမီလီဂရမ်ဖြစ်သည်။
အဘယ်အရာကို Adderall XR နှင့်အတူအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်?
Adderall XR သည်မူးယစ်ဆေးဝါးကိုစုပ်ယူသုံးစွဲနိုင်သောခန္ဓာကိုယ်၏စွမ်းရည်ကိုမထိခိုက်စေဘဲအစားအစာများနှင့်အတူပါ ၀ င်နိုင်သည်။ သို့သော်အစာအိမ်ရှိအက်ဆစ်ဓာတ်မြင့်မားခြင်းသည်ခန္ဓာကိုယ်မှစုပ်ယူလိုက်သော Adderall XR ပမာဏကိုလျော့နည်းစေပြီးထိရောက်မှုနည်းစေသည်။ ထို့ကြောင့်အစာအိမ်အက်ဆစ်တိုးပွားစေသောအစားအစာများကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
Monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) များသည် ဘယ်တော့မှမ Adderall နှင့်အတူခေါ်ဆောင်သွားခံရဖို့။ Adderall နှင့်ပေါင်းစပ်သောအခါပြproblemsနာဖြစ်စေနိုင်သောအခြားဗဟိုအာရုံကြောစနစ် (CNS) ဆေးများတွင် -
ဤသည် Adderall XR နှင့်ဆက်နွယ်သောမူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုအပြည့်အစုံဖြစ်နိုင်သည်။ Adderall XR နှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှမူးယစ်ဆေးဝါးဆက်စပ်မှုများအကြောင်းကျန်းမာရေးပြုစုစောင့်ရှောက်သူကိုတိုင်ပင်ပါ။ Adderall XR နှင့်ကုသမှုမစတင်မီသင်သောက်သုံးသည့်ဆေးဝါးများ၊ ဖြည့်စွက်မှုများသို့မဟုတ်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များမဆိုကြိုတင်ဆေးသောက်ရန်မသင့်ကြောင်းသင့်ဆရာဝန်အားပြောပါ။
သတင်းအချက်အလက်သတ်မှတ် Adderall ဆေးပညာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအမျိုးသားစာကြည့်တိုက်
သတင်းအချက်အလက်သတ်မှတ် Adderall XR ဆေးပညာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအမျိုးသားစာကြည့်တိုက်
အမ်ဖီတမင်းနှင့်စိတ်ကြွဆေး၊ Redwood အဆိပ်သင့်ဓာတ်ခွဲခန်း
အတိတ်နှင့်ပစ္စုပ္ပန် - အမ်ဖီတမင်း - ဆေးဝါးနှင့်လက်တွေ့ရှုထောင့် , Psychopharmacology ၏ဂျာနယ်
ဇီဝစမ်းသပ်မှု , Arizona တက္ကသိုလ်မက်သမ်ဖက်တမင်းနှင့်အခြားတရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးပညာရေး
Adderall သည်သင်၏စနစ်တွင်ဘယ်လောက်ကြာကြာနေရမည်နည်း ? အမေရိကန်စွဲစင်တာများ
ကြာရှည်စွာလုပ်ဆောင်သောစိတ်ကြွဆေး: ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်ဆေးထိုးခြင်း , ကနေဒါကလေးနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
ပဋိသန္ဓေတားဆေးသည် ၀ က်ခြံကိုကူညီရန်အချိန်မည်မျှကြာသည်
ဆေးစစ်ဆေးမှုတစ်ခုတွင် albuterol inhaler ကိုပြလိမ့်မည်
allegra နှင့် allegradတို့ဘာကွာသလဲ